Shirkada Daryeel Deegaan ee Garowe oo ka warbixisay Hawlaha Nadaafada (Dhegayso) | Puntland Vision
Shirkada Daryeel Deegaan ee Garowe oo ka warbixisay Hawlaha Nadaafada (Dhegayso)
February 20, 2018 By News Desk Leave a Comment
Maamulaha Shirkada qaabilsan Nadaafada Magaalada Garowe ee Daryeel Deegaan Mr Cabdicasiis Maxamuud Axmed oo la hadlayay RadioGarowe ayaa ka warbixiyay hawsha nadaafada magaalada sida ay tahay iyo waxa ay ka qabteen bilicda guud ee Magaalada Garowe .
Maamulaha ayaa sheegay in ay soo kordhiyeen Qalab iyo gaadiid loogu talagalay ka shaqaynta Nadaafada kuwaasi oo ah kuwo Casri ah .
Waxaan waydiinay Qashinka Magaalada laga qaado sida la yeelo waxaana uu sheegay in meel magaalada u jirta 20 km ay geeyaan halkaasna ay ku gubaan .
Cabdicasiis Maxamuud ayaa tilmaamay inay shaqeeyaaan labo waqti Maalintii iyo habeenkii , Waqtiga maalinkii waxa uu sheegay inay qaadaan qashinka adkaha ah halka habeenkii la qaado waxyaalaha dareeraha ah.
Maamulaha Daryeel Deegaan ayaa tilmaamay in dadku hadda ay aad u fahmeen arimaha nadaafada oo ay la shaqeeyaan shirkada , waxaana uu xusay in qidmad lacag ah laga qaado dadka
Shirkada nadaafada Daryeel Deegaan ayaa ah Shirkada Dawlada Hoose ee Garowe u wakiilatay ka shaqaynta nadaafada , waxaana hawshan loo dhiibay laga soo bilaabo sanadkii 2016 kii ilaa haddana ay ka shaqayso.
Hoos ka dhegayso Codka Maamulaha Shirkada.